ညီနေမင်းAnswers, errors, Virus
"c:windows\_system32\_rundll32.exe" error message အတွက်
email နဲ့ပို့ပြီးမေးထားတဲ့ တစ်ယောက်အတွက် ဖြေပေးလိုက်တာပါ .." hello ko nay min ညီမစက်မှာ control panel ဖွင့် ၇င် မပွင့်ပဲ (attach file မှာကြည့်ပေးပါ)ဒီလို box ပဲကျနေတယ်.. အဲ့လိုမဖြစ်ခင် kaspersky 2010 ကို runလိုက်မိတယ်.. ဆိုင်လားတော့မသိပါဘူး သိပ်နားမလည်လို့ပါ .... "နည်းလမ်း (၁)(၁) start >> run >> ကိုသွားလိုက်ပါ(၂) sfc /scannow လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ .. error message ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် ..နည်းလမ်း(၂)အပေါ်နည်းနဲ့ အဆင်မပြေရင် အောက်က ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ . အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download 4share ၊ Download nyinaymin.net
ပထမဦးဆုံး ကိုလိုချင်တဲ့ template တွေကို လိုက်ရှာလိုက်ပါ . အကောင်းဆုံး template ၀ဘ်ဆိုက်လင့်တွေကိုလဲပေးထားပါတယ် .http://www.eblogtemplates.com/templates/blogger-templates/http://btemplates.com/နောက်ထပ် ထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင် Google.com ကနေ blog templates ဆိုပြီးသာရှာလိုက် တန်းစီထွက်လာလိမ့်မယ် ...ပြောင်းနည်းပထမဦးဆုံး အဲ့ဒီ့ဆိုက်တွေကနေ ကိုသဘောကျတဲ့ template ကို Download ချ ဇစ်ဖြေထားလိုက် .. ပြီးရင် ယခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ template ကို နောက်တစ်ခါ ပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပုံ(၁)မှာပြထားသလိုမျိုး Download ချထားလိုက် .ကဲအိုကေပြီဆိုရင် အောက်က အဆင့်အတိုင်းလုပ်ကြရအောင်(၁) Layout >> Edit Html ကိုသွားပါ .. ပုံ(၂) ကိုကြည့်ပါ ..(၂) ပုံ(3) Browse ကနေ ဖြေထားပြီးသား template ကို ရွေးပြီး upload ကိုနှိပ် .(၃) ပုံ(4) ကလို သူမေးလာလိမ့်မယ် . comfirm & save ကိုရွေးလိုက်ပါ ..(၄) ပုံ(5) ကလိုမျိုး အိုကေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါလိမ့်မယ် . ကဲသွားကြည့်လိုက်တော့ တန်းပလိပ်ကို အသစ်လေးပြောင်းနေတာတွေ့လိမ့်မယ် .ကဲအခုဆိုရင် တန်းပလိပ်ပြောင်းတတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ် .. <<<< ပုံ(၁) >>>> <<<< ပုံ(2) >>>>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <<<< ပုံ(3) >>>>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <<<< ပုံ(4) >>>>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <<<< ပုံ(5) >>>>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ကွန်ပျူတာအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုသူများအတွက်ပါ .. ဘယ်စာအုပ် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုက သိသလိုလိုရှိပေမယ့် တစ်ကယ်ဖတ်ကြည့်မှ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် . အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ ..
ဦးအေးကိုကို B.E (Electronics)ရေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ခြင်း အခြေခံနည်းစနစ်နှင့် တကယ့်လက်တွေ့ပြုပြင်ခြင်း မှတ်တမ်းများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ .. အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ် . အခုတင်ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ hardware ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ hardware ပိုင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသလို တစ်ကယ်လဲ လက်တွေ့လုပ်ခဲ့ပါတယ် . အခုစာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတောင် ကျွန်တော်နဲ့ အပြင်မှာ တစ်ကယ် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနေမှာပါ . နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် hardware နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေကို ပြောပြသွားပါ့မယ် အခုတော့ တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို အားပြုပြီး Download လုပ်သွားကြပါဦး . Hardware နဲ့ software ပိုင်းမှာ ဘယ်ဟာက ပိုခက်လဲလို့တော့ မမေးပါနဲ့ . နှစ်ခုလုံးဟာ ခက်ခဲကြတာပါပဲ . ကျွန်ပျူတာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ် . ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာဟာ ပုံသေနည်းမရှိသလို . တသမတ်တည်း မကျပါဘူး . ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာ hardware ပါပဲ . ဒီစာအုပ်လေးကို လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ကြပါ .. ကျွန်တော့်ကို ခင်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အခုအချိန်မှာ ကွန်ပျူတာ hardware ပဲဖြစ်ဖြစ် software ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကယ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုများ မေးမြန်းနိုင်သလို ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးသွားမှာပါ. လက်လှမ်းမှီ သလောက်ပေါ့ . ဒါပေမယ့် တစ်ခါတည်း စကားတစ်ခုတော့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန် ထားချင်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ကို ခင်တယ် ချစ်တယ်ဆိုရင် . ဘယ်တော့မှ hacking နဲ့ပတ်သက်တာတွေ မမေးဖို့နဲ့ . သူများမေးလ်တစ်ခုရဲ့ passward ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မမေးဖို့ ကြိုပြီး တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ် . တစ်ခြားပတ်သက်တာတွေ မေးနိုင်မြန်းနိုင်ပါတယ် . သူငယ်ချင်းတို့လိုပဲ တစ်ချိန်က chatting ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် . ပျော်ခဲ့တယ် . အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ကွန်ပျူတာတိုးတက်ဖို့နဲ့ ဒီ့ထက်ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းပဲ ရှိတော့တာပါ . သူငယ်ချင်းတို့လဲ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ chatting မှာ တစ်နေ့လုံးထိုင်ပြီး စကားပြောနေတာတွေကို ရပ်တန့်ပြီး နည်းပညာပိုင်းတွေဘက်ကို လိုက်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါ . တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် . အချိန်မှီပါသေးတယ် . နည်းပညာဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာ မရှိသလို . ပြီးစီးသွားတယ်ဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး ..
(5) e-mail Attach တွဲပို့ခြင်း အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံနှင့် search Engine အကြောင်း တွေကိုပါ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရမှာပါ .. ဆရာမျိုးသူရနဲ့ ဦးဇော်လင်းတို့ ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေပါ ..သူတို့တွေ ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို နားလည်သလောက်ဖတ်ပြီးတော့မှ ကွန်ပျူတာကို တတ်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ .. အခု ကျွန်တော် sharing ပြန်ခွဲပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကို အင်တာနက် စသုံးတဲ့သူတွေအတွက် တစ်ကယ်မလိုဘူး လိုတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ပြီးလို့ စာရွက် ၅ ရက်မပြည့်ခင် သိပါလိမ့်မယ် . Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Sharebeast | Tusfiles | Mirrorcreator
ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ xp ပုံစံ mouse cursor ကို vistor ပုံစံလေးများ ပြောင်း မသုံးချင်ကြဘူးလား .. ကျန်တာတွေဘာမှမပြောင်းဘဲ corsor လေးပဲ ပြောင်းမှာပါ . လုပ်နည်းကိုလဲ ပြောပြပေးပါ့မယ် ..
၁။ ရလာတဲ့ဖိုင်ကို ဖြေလိုက်ပါ ..
၂။ install ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း right click နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ ..
၃။ start >> setting >> control panel ကိုသွားပြီး mouse ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
၄။ mouse >> pointer ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
၅။ scheme မှာ Aero cursor(Alphablended) ကိုရွေးလိုက်ပါ ..
၆။ မိမိကြိုက်တဲ့ cursor ကိုရွေးလို့ရပါပြီ .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..
Download mediafire ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload ၊
မြန်မာပြည်ကနေတော့ အဆင်ပြေကြလားမသိဘူး .. အဆင်ပြေသလိုသာ ကြည့်ကြပါ . ကျွန်တော်ဒီနေ့ စိတ်ကူးပေါက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
mgsanda: အစ်ကို အခုကျွန်တော့်စက်မှာ RECYCLER ဆိုပြီးhidden folder တစ်ခု ရောက်နေတယ်သူငယ်ချင်းက virus ဆိုလို့ shift+del လုပ်တာခဏပဲပျက်တယ်။ နောက်နေ့ပြန်ရောက်နေပြန်ရော အဲဒါအန္တရာယ် ရှိပါသလား၁။ Tools >>Folder Options >> View ကိုသွားပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့နံပါတ်တွေကို အမှန်ခြစ်လေးပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။-- (I) display the contets of system folders-- (II) hide extensions for known file types-- (III) hide protected operating system files(Recomended)၂။ Download unlocker ကို Download လုပ်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ recycler ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို unlock လုပ်ပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ . Unlocker ကို အောက်မှာ တစ်ခါတည်း တင်ထားပေးပါတယ် ..Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload၃။ သတ်တဲ့အချိန်မှာ " can not delete RECYCLER:access is denied." ဆိုပြီး error message ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ OK ပေးလိုက်ပြီး unlocker ပေါ်လာတတ်ပါတယ် . အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါ "noaction","delete","rename","move" ထဲက Delete ကိုပေးလိုက်ပြီး ဖျက်ပစ်ပါ .. RECYCLER virus ပျက်သွားပါလိမ့်မယ် ..
ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင် အရင်ကလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီ .. သီချင်း၊ Movies တွေကို Download လုပ်တဲ့ program ပါ .. နာမည်ကြီးသလား ဆိုတာကတော့ အခုအချိန်မှာ ပရိုဂျူဆာတွေ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုထဲမှာ limewire လဲအပါအ၀င်ပေါ့ . ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် တစ်ကယ်တော့ Internet မှာ ဘယ်သီချင်းကိုမှ sharing ပေးလို့မရပါဘူး . ဆင်ဆာနဲ့ငြိပါတယ် .. အမှန်တစ်ကယ် share ပေးတဲ့သူကိုသိရင် တရားစွဲဆိုလို့ရပါတယ် .. အခုပေးတဲ့ Limewire ဟာ သီချင်းတွေ movie တွေကို အခမဲ့ရှာပေးနိုင်သလို အခမဲ့ share ပေးတဲ့ program တစ်ခုပါပဲ ..LimeWire5pro- The Fastest P2P File Sharing Program on the Planet, running on the Gnutella Network. It is open standard software running on an open protocol, free for the public to use. LimeWire allows you to share any file such as.mp3s, .avis, jpgs, tiffs, etc., allows you to search for multiple files at the same time, available in several different languages, and is most famous for its ease-of-use and cross-platform compatibility. Limewire5prois written in Java, and will run on Windows, Macintosh, Linux, Solaris, and other computing platforms.Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download ifile.it ၊ Download 4shared
ညီနေမင်းFile ပြန်ဖြေမည့် နည်းလမ်းများ
ကဲ ပထမဦးဆုံး Program ကို အရင် Download လုပ်လိုက်ပါဦး . အရင်က ဒီပို့စ်မှာ တင်ထားပေး ပါတယ် . Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း ကိုဖြေမယ့်ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုထားလိုက်ပါ .. ပုံနှင့် တစ်ပုံချင်းစီ ပြထားပါတယ် . ပုံသေးနေရင် ကလစ် နှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ် .. Hj split ဟာ ဖိုင်ခွဲတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးပါ. win rar တို့ win zip တို့က ဖိုင်ခွဲပြီး ပြန်ပေါင်းတဲ့ အချိန်မှာ error တက်တတ်ပါတယ်. hj split မှာတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်. ပုံ(၁)
ACDSee Photo Manager 2009 lets you quickly view and find photos, fix flaws, and share your favorites through e-mail, prints and free online albums. Never wait for an image to open again - ACDSee 2009 is the fastest viewing software around. Fill your screen with photos, zoom through your thumbnails, and view photos at full size.\_
ကဲ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး screen saver ပါ ပေါင်းပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်နော် .. Halloween ဆိုတာကိုသိလား ... သရဲညလို့တင်စားထားပါတယ် . အဲ့ဒီ့ညမှာ သရဲချောက်ကြတာပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နောက်ကြတာပေါ့ .. ပျော်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ် .. Download rapidshare ၊ Download deposites ၊ Download megaupload
ဇေယျာဖြိုး: ကိုညီနေမင်းရေ ညီလေး အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယို code လေးလိုချင်လို့ကဲညီလေးရေ အစ်ကို ညီလေးကို မေးလ်ကနေတော့ မပို့လိုက်တော့ပါဘူး .. နောက်လူများလဲ သိချင်နေရင် တစ်ခါထပ်ဖြေပေးနေရမှာစိုးတာနဲ့ ပို့စ်အဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အစ်ကိုဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဲ့ဒီ့ဖိုင်ကိုဖြေလိုက်တာနဲပ Notepad နဲ့ရေးထားတဲ့ ကုတ်တွေကို ညီလေးတွေ့ရမှာပါ . အဲ့ဒီ့ကုတ်တွေကိုယူပြီး ထည့်လိုက်ပါ ... အဆင်ပြေတဲ့ link ကသာယူလိုက်ပါ ...Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download megaupload ၊ Download rapidshare
ကျွန်တော် ဘယ်လောက်နေမကောင်းကောင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်တော့ တင်ဖြစ်အောင်တင်ပါတယ် . ၀ဘ်ဆိုက်ပဲ လုပ်နေလို့လဲ ဘေးက သူငယ်ချင်းတွေက မျက်စောင်းထိုးလှပြီ . ထိုးမှာပေါ့ . ကျွန်တော်က အပေါင်းအသင်းမဲ့တဲ့ အထီးကျန်သမားတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတာလေ . မိုးလင်းက မိုးချုပ် ပို့စ်တင်ဖို့ .. ဖိုင်တွေတင်ဖို့လောက်ပဲ သိတဲ့ကောင်ကိုး . လူမှုရေးဆိုတာ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်သလိုပါပဲ .. အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာနားကနေ မထချင်တော့ဘူး .. နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မိုးလင်းကမိုးချုပ် ကွန်ပျူတာနဲ့ နဘန်းလုံးနေရပေမယ့် ဒီအလုပ်ကို စိတ်မကုန်သွားဘူး .. မောနေရင် ကျွန်တော် ဒီဘလောဂ်လေးကိုလာ စီဘောက်စ်မှာ ဘယ်သူတွေအော်ခဲ့လဲ ကြည့်လိုက်ရင် အမောပြောသွားတယ် . ကျွန်တော် ထိုင်းမှာ ရောက်နေတုန်းအချိန်တွေမှာသာ ဖိုင်တွေကို အများကြီးတင်နိုင်၊ မျှဝေနိုင်မှာပါ .. မြန်မာပြည်ရောက်ရင် ကွန်ပျူတာ သုံးနိုင်ပေမယ့် အင်တာနက်သုံးဖို့က သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ . ကျွန်တော်ဘ၀ကြီးကို ဟိုးအရင်လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ ကျော်လောက်ကတည်းကသာ အခုလို အင်တာနက်ကို စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲခွင့်ရခဲ့မယ်ဆို . အခုထက်အထိ သူငယ်ချင်းတွေကို အကျိုးပြုနိုင်မှာပါ . ဒါပေမယ့် အချိန်ဆိုတာ ကိုက အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ရင် ကို့အတွက် နောင်တစ်ချိန်မှာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ နီးစပ်ခွင့် ထိတွေ့ခွင့်ရမှာပါ . ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကျော် ၇ လလောက်ကတည်းက chatting ကို မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ ... တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော့် လိပ်စာလေးကိုပေးထားတယ်ဆိုတာ . မသိတာလေးတွေရှိရင် မေးမြန်းလို့ရအောင် တမင်ပေးထားတာပါ . နာမည်လဲမကြီးချင်ပါဘူး .. ဟိုးအရင်တုန်းက တစ်ခြားဆိုက်တွေကို လိုက်လည်ဖို့အချိန်တွေပေးနိုင်ပေမယ့် . အခုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အပိုချိန်ဆိုတာကို မရှိသလောက်ပါပဲ . Google ကနေ လိုက်ရှာ နောက်ဆုံးပေါ်ဆိုတာကို သူများတွေကို ငွေကြေးမပေးပဲ သုံးလို့ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်လိုက်ပြီး ရှာပါတယ် . ကျွန်တော်စုထားတာလေးတွေလဲ တင်ပေးသလို .. ထိုင်းကနေ ၀ယ်ထားတာလေးတွေကိုလဲ တင်ပေးပါတယ် . အများအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆီကနေ ရလာတာပါ .. ကျွန်တော့်ဆိုက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘယ်ပို့စ်ကိုမဆို ဝေဖန်သွားလို့ရပါတယ် . အကောင်းဆုံးစကားတစ်ခွန်းကိုတော့ ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် ... ဘလောဂ်မရေးတတ်ရင်လဲ ကျွန်တော် လမ်းညွှန်ပေးပါတယ် . ပြောပြပါတယ် . ဘလောဂ်အိမ်လေးဖြစ်လာဖို့လွယ်ပေမယ့် . မွေးဖွားလာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလောဂ်လေးဟာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ ၊ ဖြူဖြူစင်စင်လေးရှိမယ်။ အေးချမ်းနေမယ်ဆိုရင် မေတ္တာတရားဆိုတာ ကိုယ့်ဆီကို နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ကြိုဆိုနေတာပါ . ကျွန်တော် ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် .. mydiary ဆိုတဲ့ ညီမလေးပါ . လူကိုမမြင်ဖူးသလို . စကားတောင် မပြောဖူးပါဘူး . သူ့ဆိုက်လေးမှာ ရေးထားတာလေးကို ကျွန်တော်က ဆွေးနွေးပေးတာလောက်ပါ . သူ့ဆိုက်ထဲမှာက စီဘောက်စ်ဆိုတာ မလိုသလို . nero counter လို လူဘယ်နှစ်ယောက်လာလည်တယ်ဆိုတာလဲ မလိုပါဘူးလို့ ရေးထားတဲ့ပို့စ်လေးကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် . တစ်ကယ်တော့ အပြင်ပမ်းကြည့်ရင် မလိုအပ်ပါဘူးလို့ .. ဒါပေမယ့် ဘလောဂ်ရေးတဲ့သူတိုင်း ကိုယ့်ဘလောဂ်ကို လာလည်စေချင်တာ . ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကို ခံစားစေချင်တာ၊ ကိုယ်သိတဲ့အသိပညာကို သိစေချင်တာ၊ ဝေမျှချင်တာတွေဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ် ... အဲ့ဒီ့တော့ ကိုဘလောဂ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင် လာလည်တဲ့သူတွေ တိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်စီဘောက်စ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုရေးခဲ့ရင် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ဖော်ပြလို့မရတဲ့ ပီတိကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် .. ကျွန်တော့်စီဘောက်စ်မှာ လေးလေးစားစားနဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ အကောင်းဆုံးအဖြေတွေကို ပေးခဲ့တာချည်းပါပဲ . တစ်ချို့မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော်ဖြေဖို့ မတိကျတိုင်း Google ကိုအားကိုပြီးရှာ၊ လိုက်ဖတ်ပြီးမှ အဖြေကိုပေးတာချည်းပါပဲ .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စီဘောက်ကိုလာလည်ပြီးရေးခဲ့တိုင်း ရလိုက်တဲ့ပီတိက အရမ်းကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ် . အဲ့ဒီ့လိုကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ အဲ့ဒီ့ညီမလေးလဲ စီဘောက်စ်ထည့်ဖြစ်သွားတာနေမယ်ထင်ပါတယ် . တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်စာရေးတာ အလွန်နဲပါတယ် . ဒီနေ့တော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်လာတာနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ ...သူငယ်ချင်းများရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ကြေနပ်နေတတ်တဲ့ညီနေမင်း
လာပြန်ပြီဗျာ . နောက်ထပ်တစ်မျိုး . ဒီကောင်လေးကလဲ Downloader လေးပါပဲ .. စမ်းကြည့်ပါဦး . အားလုံးက Pro တွေချည်းပဲဆိုတော့ ဘယ်ကောင်က အားသာတယ် ဘယ်ကောင်က အားနည်းတယ် သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့ . ဟုတ်ပြီလား .
Download Megaupload ၊ Download Mediafire ၊ Download ifile.it
ကဲနောက်ထပ်ထွက်တဲ့ Downloader အသစ်ပါ .. ဒါပေမယ့်သူကလဲ ရှေ့က downloader များကို အမှီလိုက်နေတာပဲနော် . အထင်မသေးနဲ့ BitComet isaBitTorrent/HTTP/FTP download management software, which is powerful, fast, very easy-to-use, and completely FREE. It contains many advanced features that can accelerate your downloading up to5- 10 times faster, or even more.
Download mediafire ၊ Download Megaupload Read More
အင်တာနက်လိုင်း မကြာခဏလိုင်းပြုတ်ပြုတ်ကျ တတ်တဲ့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မီးပြတ်တာတို့၊ PC Hang တာမျိုးတို့ဖြစ်တတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ download မှ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ download manager ဒါမှမဟုတ် Download accelator plus တို့လို software တစ်ခုခုမှတစ်ဆင့် download လုပ်ယူတာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီ software တွေကိုခံပြီး download လုပ်ခြင်းအားဖြင့် download လုပ်ပြီးသား data များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အစမှပြန် download လုပ်ရခြင်း ဒုက္ခမှ ကင်းဝေးနိုင်သည့်အပြင်၊ လိုင်းကျတတ်တာတို့၊ မီးပျက်သွားတာတို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကွန်ပျူတာတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် download လုပ်နေစဉ်အချိန်အတောအတွင်း ရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ပူစရာမလိုပါဘူး။ အစမှပြန်ပြီး download လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာကနေ ပြန်ပြီး auto download လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အခုအချိန်အထိ software လေးကိုပဲ သုံးနေတာပါ။ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။ပြီးမှ ကောင်းလိုက်တာဖြစ်နေဦးမယ် ..Download Accelerator Plus (DAP)9is the world's most popular download manager, with over 165 million users worldwide. DAP accelerates your download speed so you can get all your favorite files, applications, and videos as fast as possible. Additionally, DAP features powerful privacy, security, and file management tools letting you download with confidence and flexibility. DAP is easy to use, working automatically with your web browser to provide the fastest download speed possible. DAP9has been enhanced with advanced new capabilities. New features includeafree YouTube downloader; free video converter for iPod or PSP, Internet Explorer and Firefox style downloading; and new innovative Multi Antivirus security analysis.Download Rapidshare ၊ Download Megaupload ၊ Download 4shared
photoshopcs2: Password မှားတာလားမသိဘူး.. ဒီမနက်တစ်မနက် လုံးမှာ အဲဒါဘဲခွဲ တယ် ဒါပေမဲ့ သူက wrong Password ဘဲပြောတယ်. Passowrd က ဒါဘဲမလား www.nyinaymin.netဟုတ်ပါတယ်ဗျာ .. www.nyinaymin.net ပါပဲ .. ဖိုင်ဖြေတဲ့အခါမှာ part 1 ကို right click ထောက်ပြီးဖြေရမှာပါ . ဖိုင်ဖြေမယ့်အချိန်မှာ ဖိုင်အတွေအကုန်လုံးကို Download လုပ်ထားဖို့လိုသလို . တစ်နေရာတည်းမှာပဲ စုစည်းထားဖို့လဲလိုပါတယ် .. Read More
mgsanda: အစ်ကို......နည်းနည်းဂျီကျချင်လို့ *.vcr movie လေးတွေကိ *.avi (or) *.mpeg ပြောင်းချင်လို့အောက်မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် မောင်ဆန္ဒရေ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ ..AVSCapture ကိုလိုချင်ရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ .. Powervideostudio ကိုလိုချင်ရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ .. (.exe)Powervideostudio ကိုလိုချင်ရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ .. (.zip)
yahoo messenger ချက်နေစဉ် ip address ကို ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ
ထွန်းထွန်း : yahoo messenger နဲ့ chat နေရင်း တစ်ဖက် လူရဲ့ နေရာနဲ့ လိပ်စာ ကို အတိအကျ ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ software ရှိရင် ဝေမျှပေးပါလား..ကိုထွန်းထွန်းအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ip address နဲ့ နေရာကို သိချင်ရင်တော့ ဒီကို သွားလိုက်ပါ .. အဲ့ဒါ အခု ကိုထွန်းထွန်းသုံးနေတဲ့ ip address နဲ့ နေရပ်လိပ်စာပါ ...နောက်တစ်ခုက yahoo messenger ကို chat နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ ip လိပ်စာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ movie အနေနဲ့တင်ပေးထားပါတယ် .. run ကနေ ကွန်မန်း ရိုက်ပြီး လုပ်ရမှာပါ .. အဆင့်တွေကတော့ movie နဲ့ပြထားတာမို့ နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် .. ကျွန်တော့်ဖက်က အသေးစိတ်မရေးပေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါလို့ . နောက်ပြီး အခုတင်ပေးလိုက်တာကို သေချာနားလည်အောင် . ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ကြိုးစားပေးပါ ... အဲ့လောက်တော့ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် ..အောက်မယ် Download လုပ်လိုက်ပါ ...ifile.it ၊ Megaupload ၊ 4shared ၊ mediafire ၊ Read More
ဒီ program က အဝေးက ရှိတဲ့ ပုံသေးသေးလေးကို zoom ဆွဲပြီး ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ၀ါးမသွားအောင် မူရင်းပုံအတိုင်း ပုံစံမပျက်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ program ပါ . အဲ့မယ် ပုံလေးနဲ့ပြထားပေးပါတယ် . အလုပ်များနေလို့ အသေးစိတ် မရှင်းပြတော့ပါဘူး .. ကျွန်တော်ပေးနေတာတွေ အကုန်လုံးက အားလုံးအတွက် မတွေ့ဖူးတဲ့ program တွေပါသလို ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ program တွေလဲ ပါလာမှာပါ .. စမ်းပြီးသုံးကြည့်ကြပါဦး . ဆိုက်လေးကတော့ သေးတယ် 5MB ပဲရှိပါတယ် ..
Download Mediafire ၊ Read More
ညီနေမင်းApplications, File ပြန်ဖြေမည့် နည်းလမ်းများ
WinRAR isa32-bit Windows version of RAR Archiver, an archiver and archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. ကဲ အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတိုင်းရဲ့ မသိမဖြစ် Win Rar လာပါပြီ ..
ကဲကီးတွေကတော့ တင်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ အခုမှအမှတ်ရလို့ kaspersky 2010 မရှိသူများအတွက်ပါ အဆင်သင့်သုံးလို့ရအောင် ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ် .. software ပေးဖို့မေ့သွားတယ် ဆောရီး .အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ ..Download Megaupload ၊ Download Rapidshare ၊ Download MediafireDownlod links for Keys:http://www.megaupload.com/?d=IQOWLXOPhttp://www.megaupload.com/?d=JJ3MPV7Ahttp://www.megaupload.com/?d=648PJUKUhttp://www.megaupload.com/?d=YCT05W9Zhttp://www.megaupload.com/?d=RD1CB6H6 Read More
Mandriva Linux isaconvivial operating system wich adapts to your computer and peripherals. Mandriva Linux allows you make the adaptions or improvements you are seeking and to spread the advantages to friends and colleagues as you wish. Rapidshare ကနေတင်ပေးထားပါတယ် ..http://rapidshare.com/files/229913572/ma.part01.rarhttp://rapidshare.com/files/229916101/ma.part02.rarhttp://rapidshare.com/files/229918578/ma.part03.rarhttp://rapidshare.com/files/229921057/ma.part04.rarhttp://rapidshare.com/files/229923542/ma.part05.rarhttp://rapidshare.com/files/229926288/ma.part06.rarhttp://rapidshare.com/files/229928607/ma.part07.rarhttp://rapidshare.com/files/229930888/ma.part08.rarhttp://rapidshare.com/files/229933404/ma.part09.rarhttp://rapidshare.com/files/229935970/ma.part10.rarhttp://rapidshare.com/files/229938466/ma.part11.rarhttp://rapidshare.com/files/229940778/ma.part12.rarhttp://rapidshare.com/files/229943298/ma.part13.rarhttp://rapidshare.com/files/229945759/ma.part14.rarhttp://rapidshare.com/files/229948049/ma.part15.rarhttp://rapidshare.com/files/229950351/ma.part16.rarhttp://rapidshare.com/files/229952598/ma.part17.rarhttp://rapidshare.com/files/229954959/ma.part18.rarhttp://rapidshare.com/files/229957073/ma.part19.rarhttp://rapidshare.com/files/229959235/ma.part20.rarhttp://rapidshare.com/files/229961603/ma.part21.rarhttp://rapidshare.com/files/229964025/ma.part22.rarhttp://rapidshare.com/files/229966101/ma.part23.rarhttp://rapidshare.com/files/229968195/ma.part24.rarhttp://rapidshare.com/files/229970105/ma.part25.rarhttp://rapidshare.com/files/229972075/ma.part26.rarhttp://rapidshare.com/files/229974072/ma.part27.rarhttp://rapidshare.com/files/229976268/ma.part28.rarhttp://rapidshare.com/files/229978521/ma.part29.rarhttp://rapidshare.com/files/229980852/ma.part30.rarhttp://rapidshare.com/files/229983106/ma.part31.rarhttp://rapidshare.com/files/229985251/ma.part32.rarhttp://rapidshare.com/files/229987221/ma.part33.rarhttp://rapidshare.com/files/229989167/ma.part34.rarhttp://rapidshare.com/files/229991005/ma.part35.rarhttp://rapidshare.com/files/229993126/ma.part36.rarhttp://rapidshare.com/files/229995211/ma.part37.rarhttp://rapidshare.com/files/229997144/ma.part38.rarhttp://rapidshare.com/files/229999082/ma.part39.rarhttp://rapidshare.com/files/230000881/ma.part40.rarhttp://rapidshare.com/files/230002757/ma.part41.rarhttp://rapidshare.com/files/230004557/ma.part42.rarhttp://rapidshare.com/files/230006321/ma.part43.rarhttp://rapidshare.com/files/230007988/ma.part44.rarhttp://rapidshare.com/files/230009714/ma.part45.rarhttp://rapidshare.com/files/230011318/ma.part46.rarhttp://rapidshare.com/files/229911137/ma.part47.rarPassword တောင်းနေရင် mandriva ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ .. Read More
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတာလဲဆိုရင် ဓါတ်ပုံတွေကို ဆလိုက်ရှိုးပြမယ် . ပြီးတော့ အသံတွေထည့်မယ် .. website အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရိုးရိုးကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ slide show ကို အရည်အသွေးမှီမှီ လုပ်ပေးတယ် .. showbiz နဲ့တူတယ် . ဒါပေမယ့် showbiz က effect နဲတယ် . ပြီးတော့ အရည်အသွေးသိပ် မမှီဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် . ဒီကောင်လေးက effect 280 ကျော်တောင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်ကြိုက်တာက tools တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတာကိုပဲ . သုံးကြည့်ကြပါဦး ..
ProShow Gold is the complete slide show software solution for sharing your best memories on DVD, PC, and the Web! Bring still photos to life by adding motion effects like pan, zoom, and rotate. Add captions toaphoto or video and choose from over 280 exciting transition effects. It's easy to tell your story with ProShow Gold. Download 4shared
တစ်ချို့ DVD တွေက ဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူး ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ . ဘယ်ဖွင့်လို့ရမလဲ format ချင်းမှမတူတာ . တစ်ချို့ DVD player တွေက format အစုံမပါဘူး . အခုဟာက အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ် . format အကုန်ပါတယ် ..AnyDVD isadriver, which descrambles DVD-Movies automatically in the background. This DVD appears unprotected and region code free for all applications and the Windows operating system as well. With AnyDVD's help copy tools like CloneDVD, Pinnacle Instant Copy, InterVideo DVD-Copy, etc. are able to copy CSS protected Movies. You can remove the RPC region code, thereby making the movie region free and viewable on any DVD player and with any DVD player software. With the help of AnyDVD you can watch movies with non matching region codes with every DVD Player Software you like!Download Rapidshare ၊ Download Megaupload Read More
ညီနေမင်းApplications, Operating help
ဒါလေးကတော့ လိုရမယ်ရဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်တာ စုံလဲစုံသွားရအောင်လို့ .. လိုအပ်ရင်တော့ Download လုပ်ပါ . တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ကျွန်တော့်ဘလောဂ်ကို ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ဆီက ငွေကြေးအကူအညီနဲ့မှ လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ဘလောဂ်မှာတော့ . လာပြီးတော့ ပုတ်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေ ၊ နစ်နာမယ့်စကားလုံးတွေ လာမပြောကြဖို့ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါရစေ .. ကျွန်တော် ဘလောဂ်ရေးတာ ၀ါသနာပါလို့ရေးနေတာပါ အစော်ကားခံချင်လို့ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး .. ကိုယ့်ထမင်းကိုစားပြီး သူများအတင်းလိုက်ပြောနေတဲ့သူများကို လဲ အထင်မကြီးတတ်ပါဘူး .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ၀ယ်သုံးနိုင်တယ် . နားလည်တယ် တတ်ကျွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက် လာလည်ဖို့ လာဖတ်ဖို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမသိဘဲ သူများကိုသုံးသပ်တာထက် ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတာကို ဖလှယ်တာက ဆွေးနွေးတာက ပိုသင့်တော်ပါတယ် . နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ software တော်တော်များများကို အဆင်သင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေထားတာလေးတွေဟာ အစော်ကားခံဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုက်ကို မလာဖို့ကြိုပြောထားချင်ပါတယ် ..No more need to spend hours on-line browsing for drivers.. Just pop the Universal Driver CD in and Windows will automatically search the comprehensive drivers. This CD, (Iso format) contains software drivers for over 25,000 hardware components from brands such as Dell, HP,Compaq, IBM, Sony, Toshiba, Panasonic, as well ashardware component manufacturers Intel, 3Com, VIA, nVidia, ATI, SoundMax, and many moreDownload rapidshare (370 MB )http://rapidshare.com/files/105749145/Universal_XP_Drivers.2008.Rev-01.part1.rarhttp://rapidshare.com/files/105749163/Universal_XP_Drivers.2008.Rev-01.part2.rarhttp://rapidshare.com/files/105749158/Universal_XP_Drivers.2008.Rev-01.part3.rarhttp://rapidshare.com/files/105749149/Universal_XP_Drivers.2008.Rev-01.part4.rar Read More
ညီနေမင်းApplications, Operating help, Operating Systems
Emergency Boot CD 6.0
အခုပေးတဲ့ software ကိုတော့ မကြိုက်တဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲ .. ဟုတ်တယ်ဟုတ် ..Emergency Boot CDROM isabootable CDROM for IBM PC or Compatible Computer. The CDROM contain utilities usefull for fixing computer problem or to install new Operating System after system crash.What's New- Upgraded Acronis TrueImage Enterprise Server 8.0 to v9.1.- Added FBWF driver from Windows Vista Build 5112 to Windows PE such that it doesn't need ramdisk driver anymore.- Added VCom Partition Commander v9.0.- Added Symantec Norton Partition Magic v8.05.- Upgraded McAfee CleanBoot Version 1.0 to v1.0 SP1.- Upgraded Acronis Disk Director Suite 9.0 to v10.0.- Replacing VoptXP v7.2 with Raxco PerfectDisk v7.0.- Replacing TightVNC with UltraVNC-100-RC18.- Added Paragon Hard Disk Manager v6.0 Professional.- Added Windows XP/2000/NT Key Enterprise Edition v7.0.1180( Reset Lost Administrator Password on NT Based Windows ).- Added Paragon NTFS for Linux Rescue KIT.- Added Acronis TrueImage Enterprise Server 8.0 for Windows.- Added Acronis Disk Director Suite 9.0.- Added Acronis Migrate Easy v7.0.- Added R-Linux for WinPE ( EXT2FS/EXT3FS file recovery tool ).- Added Paragon EXT2FS Anywhere to mount EXT2FS/EXT3FS/ReiserFS file system directly from within WinPE.- Added McAfee CleanBoot Version 1.0 (Emergency Virus Scanner) for FAT/FAT32/NTFS drive.- Added serial mouse driver for Winternals ERD Commander 2005 v5.0.- Added DreamPack's patch for Windows 2000/XP ( Windowssfcfiles.cab ). Extract it to %WinDir%System32 replacing the original sfcfiles.dll.- Added MicroScope PC Hardware Diagnostic Tool.- Added missing menu for some utilities already included on the CD.- Added special configuration file for Volkov Commander to be loaded from CDROM.- Upgraded O&O BlueCon XXL Administrator's Suite to v5.0.714- Upgraded ERD Commander 2003 v4.2 to ERD Commander 2005 v5.0- Removing some typos from CDShell Menu.- Many essentials BUG FIXES.Directory listing of CDROM :- Windows Preinstalled Environment (BartPE + XPPE)- Hard Disk Management- Acronis Disk Director Suite 10.0- Acronis Disk Director Server 10.0- Acronis TrueImage Enterprise Server 9.1- Ranish Partition Manager- Symantec Norton Partition Magic 8.05- PC Tools & Data Recovery- AIDA Hardware Diagnostic Tool- System Memory Tester- HDD Integrity Verifier- HDD Regenerator- RecoverSoft Data Rescue PC- McAfee CleanBoot SP1- Recovery Console Environment- Winternals Administrator Pak 2006- Winternals ERD Commander 2005 v5.0- Winternals Recovery Manager Boot Client- Winternals Defrag Manager Boot Client- O&O BlueCons XXL Administrator's Suite- Paragon NTFS Linux Rescue KIT- DamnSmall Live-Linux CD/DVD (Mini Knoppix)- FreeBSD Emergency Console (RIP Rescue KIT)- Customized Micosoft DOS 7.1.0- MSDOS tools and multimedia playerAll people need this CD-ROM image to recover system, fix computer problems or to install new Operating System after system crash.Download rapidshared (700MB)http://rapidshare.com/files/97717168/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part01.rar http://rapidshare.com/files/97725213/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part02.rar http://rapidshare.com/files/97735005/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part03.rar http://rapidshare.com/files/97745836/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part04.rar http://rapidshare.com/files/97758325/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part05.rar http://rapidshare.com/files/97769872/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part06.rar http://rapidshare.com/files/97808547/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part07.rar http://rapidshare.com/files/97849297/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part08.rar http://rapidshare.com/files/97857245/Emergency.Boot.CD.DVD.ROM.v6.0.1.Final.Release.part09.rar
What makes USB Safely Remove better than the Windows 'Safely Remove Hardware' tool?The ability to hide any device from the 'stop' menu.Uses real device names and allows renaming.Keyboard shortcuts for easy device stopping.Unique menu for one-click stop.Programs autorun on device plugging/unplugging.It tells you whyadevice cannot be stopped immediatelyDownload Rapidshare ၊ 4shared ၊ ifile
My Drivers enables fast and easy detection, backup or restore of all hardware device drivers currently on your system. Also, you can even find the latest drivers for your hardware and install them onto your computer. With just one or two mouse button clicks, you will have all your hardware devices extracted and backed-up to any folder you want. When you reinstall or upgrade your system, you can restore all drivers just by clickingabutton. Afterareboot, all drivers will be re-installed and will function well. You may also choose to backupaparticular driver or all the drivers with an EXE automatic installer. If you haveaparticular item of hardware that is troublesome, just remove the driver with this software.လိုချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ ...Download Rapidshare ၊ ifile.it ၊ 4shared
FL Studio 8 XXL with Crack
FL Studio isapattern based sequencer, which means you create your songs in pieces (patterns) using the Step Sequencer and the Piano Roll view and then weld those pieces together using the Playlist window (the Playlist also supports full-featured audio tracks with hardrrive streaming). Then you can addawide range of effects to your instruments (reverb, phaser, flanger etc.) and route the resulting mixer tracks in any way you like to create complex mixing chains with ease.Download rapidshare ၊ Download MegauploadPassword တောင်းရင် salad ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ ..
AutoPlay Media Studio 7.5 + Serial
AutoPlay Media Studio makes it easy to create your own interactive multimedia software. Even if you re notaprogrammer, you'll be creating professional projects in no time. It s all done inacompletely visual, drag-and-drop design environment. From images, text, checkboxes, radio buttons and music to slideshows, video, Flash and Web content, you simply move things into place using your mouse. Then, you can add powerful interactivity withabuilt-in library of more than 785 easy to use actions.ဆွဲချင်သပဆိုရင်တော့ အောက်မှာ တင်ထားပေးပါတယ် ..Download Rapidshare ၊ Download Megaupload Read More
local ကနေ server ကို အမြန်ဆုံး upload လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ FlashFXP program
FlashFXP isaFTP (File Transfer Protocol) client for Windows, which offers the easiest and fastest way to transfer any file between your local computer andaserver on the Internet, or even directly between two servers using Site to Site transfers. Available in over 20 languages. FlashFXP offer security, performance, and reliability that you can always count on to get your job done quickly and efficiently. Use FlashFXP to publish and maintain your website, Upload and download documents, photos, videos, music and more, Share your files with your friends and co-workers, or even use it to download other shareware! There are many, many features available in FlashFXP. Download rapidshare ၊ Download megaupload
မြန်မာပြည်က gmail ကို ဘယ်လိုကျော်ပြီးဖွင့်မလဲ
ကဲဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် ultrasurf လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ် .. http://www.ultrareach.com/ ကိုသွားပါ . ပြီးတာနဲ့ ultrasurf ကို download လုပ်လိုက်ပါ ပြီးတာနဲ့ run လိုက်ပါ .. ကဲ ကျော်လို့ခွလို့ ရသွားပါပြီး .. သူကြော်ငြာထားတာတော့ အတော်ကောင်းတယ် ... * Service provided for6years * Millions of users * Users from over 150 countries * Daily hits over 300 million * Daily traffic over 5,000 GB တဲ့ .. သုံးတဲ့သူဦးရေ အတော်များတာပဲ ...
rapidshare ဖြင့် download လုပ်နည်း
http://rapidshare.com/files/132506476/ConvDocPDFWordv350-smforum.net.rar.html အဲ့လိုမျိုး လင့်ကဆိုရင် rapidshare.com က ဒေါင်းရမှာပါ ...(၁) အဲ့ဒီ့လင့်ကို address box ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ ..(၂) ပုံ-၁ မှာ ပြထားသလို free user ကို ရွေးပါ .. (၃) ပြီးလျှင် ခဏစောင့်လိုက်ပါ ... Download ချဖို့ လင့်ကျလာပါလိမ့်မယ် .. လွယ်ပါတယ် ..
ညီနေမင်းApplications, Musical softwares
ကွန်ပျူတာကို Piano အဖြစ် ပြောင်းလဲတဲ့ program ပါ .. ဘယ် music ကိုပဲလိုချင်လိုချင် .. တီးခတ်ဖို့အတွက် notes ထဲက keys တွေကို မှတ်ထားစရာမလိုပါဘူး .. piano ကို professional အထိကို တီးခတ်ပေးနိုင်တဲ့ porgram လေးပါ .. ကိုက မကစားတတ်ဘူးဆိုတောင်မှ support system မှာ လွယ်ကူတဲ့ chords တွေကို တီးခတ်ဖို့အတွက် အကူအညီပေးထားပါသေးတယ် .. ကျွန်တော် ဖက်ကနေ ဂီတကို ၀ါသနာပါပေမယ့် နားမလည်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အကူအညီဖြစ်မယ့် ဒီ program လေးတွေ့လို့ ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ .. အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. Download mediafire
ဖိုင်ဆိုက် 100 အထက်ရှိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို upload တင်မလဲ ..
အခုပြောပြချင်တဲ့အဓိကကတော့ fileflyer ဆိုက်လေးကို ကြောငြာပေးချင်တာပါ .. ဒီဆိုက်လေးက 1 GB အထိ ပို့ဖို့ လက်ခံထားပါတယ် .. မြန်မာပြည်မှာက နေရာတော်တော်များများမှာ ဖိုင်တင်ဖို့ခက်ခဲကြရတယ် .. gmail ကနေ ပို့ဖို့ဆိုတာကလဲ ဖိုင်ဆိုက် နဲနဲကြီးသွားရင် မရတော့ပြန်ဘူး ... အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မေးလ်သဘောမျိုးလဲ ဖြစ်သွားအောင် . ကိုတင်ပြီးသား ဖိုင်ရဲ့ download လင့်ကိုလဲ ပေးစရာမလိုအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် www.fileflyer.com ကနေ ဖိုင်ကို တင်ပြီးတစ်ခါတည်း ပို့ပေးလို့ရပါတယ် .. လုပ်နည်းကိုပြောပြပါ့မယ် .. ပုံ(၁) ပုံ(၂)ပုံ(၃) ပုံ(၄)(၁) http://www.fileflyer.com ကို သွားလိုက်ပါ ..(၂) ပုံ-၁ အတိုင်း လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်လိုက်ပါ ..(၃) send ကို နှိပ်ပါ .. အားလုံးပြီးသွားရင် ပုံ-၂ အတိုင်း ဖိုင်ကို တင်နေတာတွေ့ရမှာပါ ..(၄) ပုံ-၃ လို လင့်တစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီ့ရလာတဲ့ လင့်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ...(၅) ပုံ-၄ လိုမျိုး download လုပ်လို့ရတဲ့ အခြေအနေကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ..
local ကနေ server ကို အမြန်ဆုံး upload လုပ်ပေးတယ်ဆု...
ဖိုင်ဆိုက် 100 အထက်ရှိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို upload...
Megaupload မှ download လုပ်နည်း
zshare ဖြင့် download လုပ်နည်း
4shared download လုပ်နည်း